I-Google Colab okanye iGoogle Collaboratory: yintoni na | Ihardware yasimahla
Intsebenziswano kaGoogle okanye iNdibaniselwano kaGoogle: yintoni
UIsake | 30/11/2021 08:41 | ngokubanzi
Ngokuqinisekileyo uvile I-Google Colab, ekwabizwa ngokuba yiGoogle Colab, okanye mhlawumbi sisihlandlo sokuqala ukuba ufunda ngeli qonga lenkampani yaseMntla Melika. Yiba nokuba kunjalo, kubalulekile ukuba wazi kakuhle into esemva kwayo kunye nayo yonke into enokuba negalelo kwiiprojekthi zakho, kuba ineempawu ezinomdla kakhulu.
Eli qonga linxulumene ngokukodwa nehlabathi le ubukrelekrele bokwenziwa, ukufunda ngomatshinikunye Ulwimi lwenkqubo yePython...
1 Yintoni iGoogle Collaboratory?
2 Iimpawu zeGoogle Colab
Yintoni iGoogle Collaboratory?
Intsebenziswano kaGoogle, okanye iColab, Yinkonzo enye yelifu evela kuPhando lukaGoogle. Yi-IDE evumela nawuphi na umsebenzisi ukuba abhale ikhowudi yomthombo kumhleli wayo kwaye ayiqhube kwisikhangeli. Ngokukodwa, ixhasa ulwimi lwenkqubo yePython, kwaye ijolise kwimisebenzi yokufunda koomatshini, uhlalutyo lwedatha, iiprojekthi zemfundo, njl.
Le nkonzo, isekelwe kwi Incwadana yokubhalela kaJupyter, isingathwe simahla ngokupheleleyo ngeakhawunti yakho yeGmail, kwaye ayifuni kuqwalaselo, kwaye akuyi kufuneka ukhuphele okanye ufake iJupyter. Iya kukubonelela ngezixhobo zekhompyuter ukuze ukwazi ukuhlela kwaye uvavanye ikhowudi yakho, njengeGPGPUs zeeseva zayo, njl. Ngokucacileyo, njengento yasimahla, iGoogle Colaboratory ayinazo izixhobo ezisikelwe umda kwaye aziqinisekiswanga, kodwa ziyahluka ngokosetyenziso olunikezelwa kwinkqubo. Ukuba ufuna ukususa ezi zithintelo kwaye ufumane ngaphezulu, kuya kufuneka uhlawule Colab Pro okanye Pro + umrhumo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba xa ufikelela kwi-Colab ngeakhawunti yakho, into oyifumanayo ngumatshini obonakalayo apho unokuqhuba khona ikhowudi yakho, ngaphandle kwabanye abasebenzisi kunye nezixhobo. Ke ngoko, unokubuyisela umatshini wenyani kwimeko yokuqala ukuba uneengxaki. Oku kuthetha ukuba ukuba usebenzisa ikhowudi ethile kwi-VM yakho kwaye uvale isikhangeli, oomatshini baya kususwa emva kwexesha lokungasebenzi ukukhulula izixhobo. Nangona kunjalo, uya kuba neencwadi zakho zamanqaku kwi-GDrive ukuba uzigcinile, okanye ungazikhuphela kwalapha ekhaya (umthombo ovulekileyo wefomati yeJupyter .ipynb).
Iimpawu zeGoogle Colab
Xa ufikelela kwi-Google Colaboratory uya kufumana i friendly, intuitive kunye nemeko-bume ekulula ukuyisebenzisa. Enyanisweni, inesalathiso esinamaxwebhu kunye noncedo, kunye neminye imizekelo ukuqala ukuthatha amanyathelo akho okuqala, ukuguqula iikhowudi esele zenziwe kwaye uhambe uvavanyo.
Entre imisebenzi Ezona zibalaseleyo kwiNtsebenziswano kaGoogle zezi:
Hlela kwaye usebenzise ikhowudi yePython.
Gcina iiprojekthi zakho kuGoogle Drive (GDrive) ukuze ungaphulukani nazo.
Layisha iikhowudi kwiGitHub.
Yabelana ngeencwadana (umbhalo, ikhowudi, iziphumo kunye nezimvo).
Ungangenisa ngaphandle iJupyter okanye i-IPython incwadi yamanqaku.
Khuphela nayiphi na incwadi yamanqaku yeColab ekuhlaleni kwi-GDrive.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Izixhobo zasimahla » ngokubanzi » Intsebenziswano kaGoogle okanye iNdibaniselwano kaGoogle: yintoni
Ukucwangcisa: Iintlobo zedatha